Rohy rehetra hampidinana ny iOS 7.0.6 | Vaovao IPhone
Vao namoaka ny iOS 7.0.6 i Apple. Ny kinova iOS vaovao dia mifanaraka amin'ny fitaovana rehetra izay azo havaozina amin'ny iOS 7. Ity kinova iOS vaovao ity dia tsy mitondra vaovao be, fa ny fanitsiana ny lesoka fotsiny. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatray raha mora voan'ny Jailbreak amin'ny Evasi7.0.6n ny iOS 0, ka raha te hihazona ny Jailbreak amin'ny fitaovanao ianao dia tsara indrindra ny tsy manavao raha tsy fantatsika, avy amin'ny Evad3rs, raha tsia na tsia. Raha te hankafy an'ity kinova farany ity ianao na inona na inona misy Jailbreak na tsia, dia hazavainay eto ny fomba fametrahana azy amin'ny fitaovanao ary atolotray anao ireo rohy fampidinana avy amin'ireo mpizara Apple.
1 Fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA
2 Fanavaozana amin'ny alàlan'ny iTunes
Fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA
Raha tsy manana Jailbreak vita ianao dia tsotra be ny manavao. Midira amin'ny fikirana rafitra, ary amin'ny ankapobeny> Fanavaozana ny lozisialy dia ho hitanao fa miseho ilay kinova vaovao. Mila mampifandray ny fitaovanao amin'ny tamba-jotra WiFi fotsiny ianao ary misintona sy mametraka ny iOS 7.0.6 amin'ny fitaovanao. Raha manana Jailbreak ianao dia hadinoy izany satria tsy mandeha ity karazana fanavaozana ity.
Fanavaozana amin'ny alàlan'ny iTunes
Avy amin'ny iTunes dia azonao atao ny manavao ny fitaovanao. Raha manana Jailbreak vita ianao dia ho very izany. Tsotra toy ny mampifandray ny fitaovanao amin'ny iTunes izany ary manindry ny bokotra "Update" na "Restore". iTunes dia hanomboka hisintona ireo firmware vaovao ary rehefa vita dia apetrakao amin'ny fitaovanao. Raha te hampidina azy fotsiny ianao dia afaka mampiasa ireo rohy ireo, Apple ofisialy, ary mampiasa azy ireo isaky ny tianao. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra Vaovao farany na Ampodio ao amin'ny iTunes raha tsindrio ny bokotra Alt (Mac) na Shift (Windows) ary safidio ny firmware izay alainao. Ireto ny rohy:
iPod touch (taranaka 5)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Rohy rehetra hampidinana ny iOS 7.0.6
Stalin dia hoy izy:
Salama maniry ny hampidina ny rindranasa vaovao iOS 7.0 aho
Valiny tamin'i Stalin
Zuleyma dia hoy izy:
Te-hisintona ny iOS 7.0 aho
Valiny tamin'i Zuleyma
Apple dia namoaka ny bibikely iOS 7.0.6 sy 6.1.6 manamboatra